Minesweeper। Min माइनस्वीपर कसरी खेल्ने। Emulator.online
Minesweeper। उन्नीस अठ्ठाइसमा सिर्जना गरिएको, खनन क्षेत्र n१ मा मात्र विन्डोजमा विन्डोजमा आयो र आज पनि धेरै गेमरहरूलाई छक्क पार्छ। यसको ईन्टरफेस वर्षौं मा धेरै परिवर्तन भएको छ, तर खेल मैकेनिक्स अक्षुण्ण छ। म शर्त लगाउँछु यो तपाईको रुचिमा ठ्याक्कै मिल्छ: किनभने पछिल्ला अनुभवहरूले तपाईलाई धेरै सकारात्मक नतिजा ल्याएको छैन, तपाईले विस्तृत रूपमा माइनवीपर कसरी खेल्ने भनेर बुझ्न चाहानुहुन्छ।
यो ती खेलहरू मध्ये एक हो जुन कुनै पनि, आफ्नो जीवनमा कम्तिमा एक पटक, खेलेको छ। यो व्यावहारिक रूपमा विन्डोजको सबै संस्करणहरुमा आठ सम्म सम्मिलित थियो, जब माइक्रोसफ्टले यसलाई मेटाउने निर्णय गर्यो एक्लो र अन्य शौकहरू जुन तपाईंको अपरेटिंग प्रणालीमा वर्षौं बखत पूर्व स्थापित गरिएको छ। केहि यसलाई कल खान क्षेत्रसत्यमा, यो विन्डोज with को साथ शुरू गरिएको (अधिक राजनीतिक रूपमा उपयुक्त) खेलको भिन्नता हो जुन बढी वा कम ठ्याक्कै उस्तै क्वार्कहरू प्रस्तुत गर्दछ।
वास्तवमा, आजको ट्यूटोरियलमा, म विन्डोज १० स्टोरमा नि: शुल्क नि: शुल्क खानीको मैदानको बारेमा कुरा गरेर माइनफिल्ड कसरी खेल्ने र कसरी खान्ने भनेर वर्णन गर्ने छु, जुन टच-मैत्री पनि हो। र तपाइँ Xbox Live मा तपाइँको प्रगति साझा गर्न को लागी जडान गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रयास गर्नुहोस् र म आश्वासन दिन्छु कि तपाईंले त्यसलाई पछुताउनु पर्दैन! यदि तपाईं वास्तवमै सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने, म तपाईंलाई पीसी, स्मार्टफोन र ट्याब्लेटको लागि वैध वैकल्पिक विकल्पहरूबारे जानकारी दिन रोक्दिन। खुशीको पठन र सबै भन्दा माथि, रमाईलो!
Minesweeper | Minesweeper अनलाइन
माइक्रोसफ्टले जारी गरेको खेलको अन्तिम संस्करणमा २ मोडहरू उपलब्ध छन्: त्यो clásico, जसले विश्वासपूर्वक प्रोटो फिओरिटोको विशेष प्रकारको पुनरुत्पादन गर्दछ, र जुन साहसिक अर्को तर्फ, नयाँ विचित्रता प्रस्तुत गर्दछ। पहिलो सुरु गरौं, त्यसकारण तपाईं यो गाइड पढ्नुहुन्छ।
En पारम्परिक खान क्षेत्र त्यहाँ को एक ग्रिड छ कभर बक्सहरू, जसले क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जहाँ खानहरू लुकाउन सकिन्छ: जित्नको लागि, तपाईंले सब भन्दा छोटो समयमा मिल्नु पर्छ। यस संस्करणमा, माइन्सको सट्टामा तपाई लेडीबगहरू फेला पार्नुहुनेछ, तर अपरेशन परिवर्तन हुँदैन। क्लिकहरू (वा ट्याप) मार्फत वर्गहरू मेटाउने बाहेक, तपाईं माइन लुकाइराखेको छ भनि चिह्नित गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई ब्लक गर्नुहोस्, ताकि तिनीहरूलाई विस्फोट गर्न नपरोस।
तपाइँ एउटा टाँस्न सक्नुहुन्छ रातो झण्डा यी बक्सहरूमा माउसको दायाँ क्लिक वा लामो स्पर्शको साथ: फ्ल्यागहरूको सट्टामा, यस कार्यलाई दोहोर्याउँदै पहेंलो प्रश्न चिन्ह जसले छनौट गरिएका टाईलहरूलाई "अनलक" गर्नेछ र तपाईंलाई उनीहरू खाली गर्न दिनेछ। जीतको लागि, तपाइँले प्रत्येक र प्रत्येक वर्ग हटाउनु पर्छ जुन खानहरू समावेश गर्दैन, एक खानी विस्फोट नगरी।
त्यहाँ छनौट गर्नको लागि जटिलताको तीन स्तरहरू छन्: शुरुवात गर्ने, मध्यवर्ती y उन्नत। उनीहरूलाई छुट्याउन ग्रिडमा वर्ग र खानहरूको स is्ख्या हो: पहिलो in दस खानीको साथ नौ × squ वर्ग, दोस्रोमा चालीसको साथ सोह्र × सोह्र, र तेस्रोमा × × १teen र १ nine। तपाइँसँग स्तर खेल्न पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ अनुकूलन ग्रिडजहाँ कति बाकसहरू छनौट गर्न को लागी लंबाई, फराकिलो र खानको संख्या वा Coccinelle। पहिलो आठ × आठ खान क्षेत्र भिन्नता अब निःशुल्क छैन।
धेरै जसो नि: शुल्क बाकस खाली छन्, तर केहिसँग एक छ नम्बर १ देखि।: ती मूल्यवान सations्केत हुन्, किनकि त्यस क्षेत्रमा कति खानीहरू छन् भनि उनीहरूले दर्साउँदछन्। बक्सहरू मिल्नु राम्रो हुन्छ ती पछाडि बक्सहरू मेटाउनका लागि जुन भित्र नम्बर छैन र "खतरनाक" को रूपमा चिन्ह लगाउँनुहोस् जुन पछाडि पाँच वा six छ। यसका अतिरिक्त तपाईले आफ्नो भाग्यमा निर्भर हुनै पर्दछ, किनभने त्यहाँ अन्य कुनै अनौठो सल्लाह वा युक्तिहरू मिनीफिल्ड जित्ने छैनन्। यो एक धेरै राम्रो पज्जल खेल हो!
मोड साहसिक यो चाखलाग्दो नवीनता हो र यो एकदम भिन्न खेलको रूपमा देख्न सकिन्छ, यद्यपि यसले परम्परागत खानीमा काम गर्ने केही खास चीजहरू राख्छ। यहाँ, एक खानीले बाटोमा बक्स खनिज, विकृत टनेल (प्रत्येक एक स्तर प्रतिनिधित्व) को श्रृंखला मा जाने को भूमिका खेल्छ। खानको सट्टामा, पासोहरू लुकेका छन्: तपाईं life जीवनबाट सुरू गर्नुहुन्छ र हृदय स collecting्कलन गरेर बढी कमाउन सक्नुहुन्छ। सिक्का स्कोर बढाउन।
परम्परागत भन्दा एड्भेन्चर मोड कम "निराश" छ, यदि तपाईंले जाल फेला पार्नुभयो भने तपाईंसँग अझै २ स्तरहरू भर्नको लागि अन्य २ सम्भाव्यताहरू छन्। सिक्का र अन्य संकलन आईटमहरूको उपस्थिति भूलभुलैया ढोका अनलक गर्न (मा जारी छसाहसिक) गेमि experience्ग अनुभवलाई अझ दृढ बनाउँदछ: बक्सहरू कुनै पनि बेला अनलक हुनको लागि नजिकैका चीट्सको पहिचान नम्बर समावेश गर्न सक्दछ र म्याक्निकहरू पहिले वर्णन गरिए जस्तै उस्तै हुन्छन्।
सिक्का बाहेक, खानीले संकलन गर्न सक्दछ सुन बुलियन y armas विरोधीहरूलाई मार्नुहोस् र तपाईंको मार्गमा जालहरू मेटाउनुहोस्: यी प्रत्येक कार्यले खेलको स्कोर बढाउन मद्दत गर्दछ। त्यहाँ कुनै झण्डा वा प्रश्न चिन्हहरू छैनन्, तर रातो र सेतो स signs्केतहरूaसँग छन् विस्मयादिबोधक चिह्न, जुन वास्तवमा उही उद्देश्य हो र दायाँ क्लिक वा लामो स्पर्शको साथ सक्रिय छ।
नयाँ यहाँ समाप्त भएन, किनकि माइनिफिल्डले अब निश्चित पनि प्रदान गर्दछ दैनिक चुनौतीहरू तिनीहरू परम्परागत उत्तम मोडमा आधारित छन् र तपाईंलाई खेलमा खर्च गर्न सकिने बोनसहरूको लागि मासिक लिडरबोर्डमा चढाउन दिनुहोस्। यी दैनिक चुनौतीहरू खेलको मुख्य पृष्ठबाट पहुँच गर्न सकिन्छ र यो विभिन्न कार्यहरू भर्न प्रस्ताव गरिएको छ: उदाहरणको रूपमा सेवा गर्न, एउटा चुनौतीमा तपाईंले झण्डा (१० कुनै बाकस छोड्नुभएन) मार्फत दस खानाहरू मार्क गर्नुपर्ने हुन सक्छ र अर्कोमा चरणमा जानको लागि। खानाहरू।
चुनौतिहरूले काँसा, चाँदी, सुन र हीराको sh शील्डहरू दिन्छन्, मासिक प्रगतिमा निर्भरता। जटिलताको स्तर क्लासिक मोड को झल्काउँछ - तपाईं एक चुनौती पार गर्न सक्नुहुन्छ एक शुरुआतको रूपमा, मध्यवर्ती वा विज्ञ.
अद्वितीय पुरस्कारको अतिरिक्त, जुन मुख्य रूपमा खेलको प्रीमियम संस्करणमा सन्दर्भ गर्दछ (जुन म छिट्टै कुरा गर्छु), पोइन्टमा पुग्नको लागि हो लक्ष्य Xbox प्रत्यक्ष
हो, तपाईंले त्यो सहि पढ्नुभयो! मिनफिल्ड माइक्रोसफ्ट कन्सोलमा खेल्न सकिदैन, तर तपाईं आफ्नो Xbox Live खातामा पोइन्टहरू कमाउन सक्नुहुन्छ! अब, पर्याप्त कुराकानी: समय आयो तपाइँको कम्प्युटर मा Minesweeper कसरी स्थापना गर्ने बुझ्ने।
Minesweeper को विकल्प
अब म निश्चित वर्णन गर्न जाँदैछु खान क्षेत्र को लागी विकल्प छनौट गर्न को लागी यदि तपाइँ माइक्रोसफ्ट माइनस्वीपरसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न
Minesweeper: आवश्यक (Windows XNUMX)
मैले प्रस्ताव गरेको पहिलो वैकल्पिक विकल्प हो खान क्षेत्र: आवश्यक, एक नि: शुल्क प्रोग्राम जुन तपाईं आधिकारिक विन्डोज १० स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्छ र जुन तपाईं बटनमा क्लिक गरेर स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ प्राप्त गर्नुहोस्। खेलहरूमा कुनै add-on खरीदहरू वा विज्ञापनहरू छैनन्। यद्यपि एक साहसिक मोड हराइरहेको छ। यो pred पूर्वनिर्धारित जटिलता स्तर र एक अनुकूलित पारंपरिक फूल घाँस का मैदान हो।
ग्रिडको आयामहरू र खानाहरू प्रति खण्डको संख्या मानक छ, त्यसैले, माइक्रोसफ्टको खानी क्षेत्रमा जस्तो। ग्रिडको अनुकूलनले ठ्याक्कै उही मानहरू प्रदान गर्दछ: नामहरू परिवर्तन हुन्छन् भन्ने तथ्यले गर्दा यहाँ तपाई मोड बीच चयन गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो, मिडिया वा कठिनाई। भित्र विकल्पहरू तपाइँले खेलको ग्राफिक्स अनुकूलन गर्न themes थिमहरू फेला पार्नुहुनेछ र टाइमर, ध्वनी र बारम्बार प्रश्न चिन्हसँग सम्बन्धित केहि नियन्त्रणहरू। यो शीर्षक को प्रतिज्ञा को रूप मा वास्तव मा आवश्यक छ।
यो खान क्षेत्र एक प्रणाली प्रदान गर्दछ तथ्याistic्क खेलहरूमा प्राप्त स्कोरमा, तर तपाईं Xbox Live मा तिनीहरूलाई साथीहरूसँग साझेदारी गर्न कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्न: यदि तपाईं प्राडो फियोरिटो मात्र खेल्न चाहनुहुन्छ भने, मलाई लाग्दैन कि यो समस्या हुन सक्छ। खेल म्याकेनिक्सको सम्बन्धमा, यो चालहरू माइक्रोसफ्ट खेलको समान छ: क्लिक वा बक्सहरू छोड्ने टच, एउटा दायाँ क्लिक वा तिनीहरूलाई चिन्ह लगाउन लामो स्पर्श। सरल, यो यस तरीकाले छैन? ग्राफिक्स पनि धेरै राम्रो छ।
Minesweeper! (विन्डोज टेन)
दोस्रो वैकल्पिक विकल्प जुन मैले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछु, Minesweeper!यो एक वास्तविक पुरानो खान क्षेत्र को लागी उपयुक्त छ। ग्राफिक्स ठ्याक्कै राम्रो हुँदैन, तर खेलले विन्डोजको लागि मूलका विशिष्टताको पुनरुत्पादन गर्दछ: सँधै र सबै अवस्थाहरूमा तपाईं यसलाई Microsoft स्टोरमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
त्यहाँ चार ग्रिडहरू छन् (जहिले पनि र सबै परिस्थितिहरूमा जटिलताको स्तरद्वारा विभाजित हुन्छ), त्यो हो सजिलो, medio, कठिनाई y दुःस्वप्न। यहाँ आयामहरू अनुकूलित गर्न कुनै सम्भावना छैन र रिहा हुने बक्सहरूको स number्ख्या धेरै, मापदण्ड भन्दा धेरै फरक छ।
सरल उत्तम मोडमा, ग्रिड १० खदानको साथ आठ × नौ वर्ग हो; १० x १२ को बीचमा बीस खानहरू; गाह्रो गाह्रो बाह्र thirty चौधौं तीस खानहरु संग र राती सपना तेह्र पन्ध्र पचास खानहरु संग। खेलका मेकानिक्सहरू प्राथमिक छन्: कुनै पनि क्लिक वा टचले संदिग्धहरूलाई चिह्न लगाउन सक्षम नगरी सम्बन्धित बक्स रिलीज गर्दछ। खेल इटालियनमा अनुवाद गरिएको छ, तर सेटिंग्स तपाईं भाषा वा विन्डोको पृष्ठभूमि पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ: पहुँच गर्न, प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस् केबिन जुन तल्लो केन्द्रमा छ।
यदि तपाईं म्याक प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईं म्याक एप्प स्टोरबाट उही नामको नि: शुल्क अनुप्रयोग स्थापना गरेर मिनफिल्ड खेल्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईं बटन थिचेर स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। प्राप्त / स्थापना गर्नुहोस्, माथिल्लो दायाँ भागमा अवस्थित र आफैंमा प्रमाणिकरण, यदि आवश्यक भएमा, मार्फत पासवर्ड तपाईंको एप्पल आईडी वा टच आईडी (यदि तपाईंको म्याकमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छ)।
गेमप्ले परम्परागत खानी क्षेत्र जत्तिकै उस्तै हो, दश × १२ र बीस खानीहरूको ढाँचाको साथ। खेल सेटिंग्स समायोजित गर्न, तपाईंले प्रतिमा थिच्नु पर्छ केबिन तल्लो केन्द्र मा स्थित र कारक छनौट सेटिंग्स खुल्ने मेनूबाट।
Minesweeper अनलाईन कसरी खेल्ने
तपाइँको कम्प्युटरमा प्रोग्राम स्थापना गरेर Minesweeper खेल्नु एकदम सरल छ, तर तपाइँ त्यो खेलको लागि डिस्क स्पेस लिने जस्तो महसुस गर्नुहुन्न। त्यसोभए किन सिधै अनलाइन खेल्ने छैन? वेबसाइटमा त्यहाँ धेरै साइटहरू छन् जुन तपाईंलाई यो गर्न दिन्छ: ती मध्ये एक हो Minesweeper अनलाइन स्टोर अनुप्रयोगमा पनि भुक्तान गरिएको संस्करण छ। मैले यो तथ्य तथ्यबाट तपाईं लाई बढाउँछु कि योसँग विन्डोजको लागि मौलिक खानी क्षेत्र जत्तिकै उस्तै उस्तै ग्राफिक्स र नियन्त्रणहरू छन्।
ठाउँ अ English्ग्रेजीमा छ, तर तपाईंलाई खेल्न सक्षम हुन भाषा जान्नु आवश्यक पर्दैन। ग्रिडसँग Microsoft Minesweeper का मानक आयाम छ: क्लिक गरेर खेल्नु, शीर्ष बाँयामा अवस्थित, तपाईं बीच छनौट गर्न सक्नुहुनेछ शुरुवात गर्ने, मध्यवर्ती y विज्ञ, जो शुरुआत, मध्यवर्ती र विशेषज्ञसँग मेल खान्छ। कस्टम उत्तम अनुकूलित मोडको लागि हो, जहाँ तपाइँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ लंबाई (उचाई) फराकिलो (चौड़ाई) र पनि minas (मेरो) चिह्नित गर्दै ब्रान्डहरू तपाइँको साइट मा, प्रश्न चिन्ह सक्षम गर्नुहोस्।
खेल मैकेनिक्सले वर्गहरू र तिनीहरूलाई मार्क गर्न दायाँ रिलिज गर्न बायाँ क्लिकको पूर्वानुमान गर्दछ: क्लिक गर्नुहोस् नियन्त्रणहरू तपाईंको किबोर्ड शर्टकटहरू र गतिहरूको सारांश हेर्नुहोस्। विकल्प रोचक छ दृश्य यसले तपाईंलाई एक सय प्रतिशतदेखि दुई सय प्रतिशतसम्म ग्रिडलाई अनुमानित वा दूरी गर्न दिन्छ।
रात मोड यसको सट्टामा, ठाउँको पृष्ठभूमि परिवर्तन गर्नुहोस् र रातभर उर्जा बचाउन विन्डोको चमक कम गर्नुहोस्।
ठिक छ, मँखाईफील्ड कम्प्युटर र अनलाइनमा कसरी खेल्ने भनेर वर्णन गरेको छु, तर यदि तपाईं यो गर्न चाहानुहुन्छ भने स्मार्ट फोन वा ट्याब्लेट? चिन्ता नलिनुहोस्: त्यहाँ धेरै नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू छन् जुन तपाईंलाई एन्ड्रोइड र आईओएस मा पनि खेल्न दिन्छ। कसैसँग मर्मत गर्ने बारहरू छन्!
Minesweeper: कलेक्टर (एन्ड्रोइड / आईओएस): परम्परागत खानी क्षेत्र का एक भिन्नता, वर्ग वा आयताकार बाहेक आकृतिहरूको ग्रिडहरू बाहेक, स्तरहरू र संग्रहणीय सामग्राहरू समावेश गर्दछ।
ग्लोब्सवीपर (एन्ड्रोइड / आईओएस) - दुई आयामी बारहरूको थकित? यो अनुप्रयोगको साथ तपाईं क्षेत्र र क्युबमा खेल्न सक्नुहुनेछ। पूर्ण रूपमा प्रयास गर्नको लागि खानीको क्षेत्र।
खानको संसार (एन्ड्रोइड / आईओएस) - खण्ड क्षेत्र को यो भिन्नता संग ग्रह को देशहरु को नक्शा मा खानहरु रोक्नुहोस् कि तपाईं भूगोल समीक्षा गर्न आमन्त्रित गर्दछ।
विन्डोज १० मा मिनफिल्ड कसरी स्थापना गर्ने
मैले खेल्न सिकेको छु, समय आउने छ विन्डोज १० मा मिनफिल्ड कसरी स्थापना गर्ने। खेल माइक्रोसफ्ट अपरेटिंग सिस्टम स्टोरमा नि: शुल्क छ, त्यसैले तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको लेखोटको साथ निलो बटन थिच्नु पर्छ प्राप्त गर्नुहोस् आधिकारिक Microsoft Minesweeper पृष्ठमा।
पहिले नै उल्लेख गरिएको अनुप्रयोग नि: शुल्क हो, तर त्यहाँ सहयोगी सशुल्क सामग्री छन् जुन स्थापना पछि अनलक गर्न सकिन्छ: तपाई सदस्यता लिन सक्नुहुनेछ प्रिमियम सदस्यता एक महिनाको लागि एक सय उन्चालिस यूरो मा वा एक बर्षको लागि .89 ..XNUMX e। दुर्भाग्यवस, खेलले ब्यानरहरू समावेश गर्दछ र छिटोछिटोले तपाईंलाई हटाउन नसक्ने केहि सेकेन्डहरूको प्रमोशनल भिडियोहरू हेर्न बाध्य पार्छ। तपाईलाई बाइपास गर्न चाहिने एक मात्र समाधान सदस्यता हो। अन्य सदस्यता लाभहरू सहायक सिक्का हुन् (जुन चुनौतीहरूका लागि हुन्) र उत्तम साहसिक मोडका लागि विशेष वस्तुहरू।
त्यसो गरिसकेपछि, कार्यवाही गरौं! डाउनलोड सम्पन्न भयो, सुरु गर्नुहोस् Microsoft Minesweeper स्टार्ट मेनूमा यसको आइकन मार्फत र यसमा खेल सुरू गर्नुहोस् क्लासिक मोड वा मा साहसिक मोड, त्यसपछि जटिलताको चाहिएको स्तरमा सम्बन्धित बक्सहरू थिच्दै: शुरुवात गर्ने, मध्यवर्ती वा विज्ञ.
मुख्य मिनफिल्ड विन्डो, जुन माथि दायाँ दुई एरोको साथ आइकनको माध्यमले पूर्ण स्क्रिनमा विस्तार गर्न सकिन्छ, तेर्सो रूपमा स्क्रोल गर्दछ: यसलाई बाँया तिर स्क्रोल गरेर, तपाईं खेलहरू र Xbox प्रत्यक्ष लक्ष्य प्राप्त तथ्या Live्कहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। तपाईं सार्न सक्नुहुन्छ विषयवस्तुहरू केवल प्रीमियम सशुल्क संस्करणको साथ: आधारभूत संस्करणमा केवल पूर्वनिर्धारित देखा पर्दछ।
यद्यपि माइनफिल्ड कन्फिगरेसन पहुँच गर्न तपाईले माथि बायाँ अवस्थित आइकनमा क्लिक गर्नुपर्दछ र कारक छनौट गर्नुपर्नेछ सेटिंग्स तपाइँलाई प्रस्ताव गरिएको मेनूबाट: यसले एक साइड प्यानल खोल्दछ जसको माध्यमबाट तपाइँले समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ खेल विकल्पहरू.
तपाईं भोल्युम समायोजित गर्न सक्नुहुनेछ र चेतावनी सक्रिय वा निष्क्रिय गर्न सक्नुहुनेछ, जबकि तपाईं तुरून्त चयन गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईं i प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ या हुँदैन प्रश्न चिन्ह। यदि तपाईंको कम्प्युटरले यसलाई अनुमति दिन्छ भने, तपाईं पनि समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ छुनुहोस् र ग्राफिक्स र तपाईं को परिवर्तन सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ द्रुत मोड र / वा आदेशहरू विस्थापन। अन्त्यमा, तपाईं यसमा सेटि restoreहरू पुन: भण्डारण गर्न छनौट गर्न सक्नुहुनेछ पूर्वनिर्धारित सेटिंग वा तथ्या reset्क रिसेट गर्नुहोस् खेल को।
एउटा अन्तिम पक्ष जुन म ध्यान दिन चाहन्छु। Xbox प्रत्यक्ष- यदि तपाईंसँग Xbox कन्सोल छ भन्ने तथ्यको कारणले तपाईं पहिले नै प्रोफाइल दर्ता गर्नुभयो भने, तपाईंले केहि गर्न आवश्यक पर्दैन र जब तपाईं अन्तमा पुग्नुहुन्छ तपाईंलाई डेस्कटपमा सूचित गरिनेछ। यदि तपाईंसँग अहिले सम्म खाता छैन भने, म तपाईंलाई यो दर्ता गराउन सल्लाह दिदैन किनकि यो पुरस्कृत हुनेछैन।